महिला दुख गर्ने, पुरुस दारुमा उडाउने
अछाम, २४ पुस । सुदूर पहाडी जिल्ला डोटीका केही गाविसका महिलाले रातदिन दुःख गरी कमाएको रकम पुरुषहरूले मदिरा र तास जुवामा उडाउने गरेको पाइएको छ ।
आफूले दुःख गरी कमाएको रकममा पनि महिलाहरूको कुनै हक लाग्दैन । सो रकम उनीहरूले सिधै घरका पुरुष सदस्यलाई बुझाउनुपर्छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अझ अचम्म त यो छ कि, त्यहाँका अधिकांश पुरुष महिलाहरूको कमाइमा आश्रित छन् । महिलाहरू रात दिन काममा घोटिँदा पुरुषहरू भने महिलाले नै कमाएको रकम मदिरापान र जुवातास खेलेर सिध्याउँछन् ।
दीपायलस्थित कुलपाते–गोपघाट सडकखण्डको सेती किनारमा २६ जना महिला नौ वर्षदेखि निरन्तर गिट्टीको व्यापार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश महिलाले आफूले कमाएको रकम आफूखुसी खर्च गर्न सक्दैनन् ।उनीहरूको कमाइ पुरुषहरूले मदिरा पिएर र तास खेलेर सिध्याउँछन् । ‘लोग्ने मान्छे कामै गर्दैनन्,’ बनलेख–८ की नारुदेवी कोलीले भनिन्, ‘उल्टै पैसा माग्छन् । दिएजति सबै रकम रक्सी र तासमा उडाउँछन् ।’
दीपायल पार गर्नेबित्तिकै गोपघाटदेखि बानडुग्रिसैन सडकछेउमा भेटिने अधिकांश महिलाको पीडा उस्तै छ । ‘ससुरा, श्रीमान् र छोराहरूको व्यवहार एउटै हुन्छ,’ बारपाटा गाविसकी थिउरी कामीले भनिन्,’ उनीहरू हाम्रै कमाइमा मस्ती गर्छन् । काम गर्ने त छोरी, बुहारी र हामीहरू मात्रैै हौं ।’
बनलेख, बारपाटा र लाटामाडौंलगायत केही गाविसका महिलाको मुख्य आयस्रोत भनेकै गिट्टी बेचेबापत आउने रकम हो । उनीहरू कुनै महिना त २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद आम्दानी गर्छन् । तर, त्यो सबै रकम सदुपयोग गर्न नसक्दा भने गरिबी र अभाव घट्न नसकेको लाटामाडौं–१ की जलुदेवी लुहारले बताइन् । ‘गिट्टी बेचे जति सबै पैसा श्रीमान्लाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा हाम्रो कुनै अधिकार हुँदैन । हिसाबकिताब राख्ने त पुरुषहरू नै हुन् ।’
महिलाहरूको त्यही आम्दानीले पुरुषहरू दिनभर चौतारो र चिया पसलमा बसेर गफ चुट्दै तास फिट्ने र साँझ परेपछि भट्टी छिर्ने काम गर्छन् । तर, महिलाहरू भने के सुत्केरी, के गर्भवती, के बिरामी सबै अवस्थामा काममै जोतिइरहेका भेटिन्छन् ।
अत्यधिक कार्यबोझ, सानैमा विवाह हुनु, उमेर नपुग्दै आमा बन्नु, आराम र उचित आहार नपाउनुजस्ता कारणले त्यहाँका महिलाहरू वास्तविक उमेरभन्दा छिट्टै बुढी देखिने गरेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी करुणा थापाले बताइन् ।‘महिलाहरू पशुवत् जीवन जिउन विवश छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो टिठलाग्दो र अमानवीय व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्छ । नत्र गाउँका महिला जहाँको तही रहनेछन् ।’
बनलेख–७ की मैनादेवी धामी भने अपवाद बनेकी छन् । उनका श्रीमान् भने अरूका जस्तै जुवातास खेल्न जाँदैनन् । श्रीमान्ले घरव्यवहार धानेकाले काम गर्न उनलाई सहज बनेको छ । उनी छाक टार्नकै लागि दिनभर गिट्टी कुट्छिन् । दाल, चामल, नुन, तेल, कपडा र छोराछोरीको पढाइ खर्च सबै त्यही कमाइबाटै चलेको छ ।‘गिट्टी बेचेर अभाव हटेको त छँदै छ, श्रीमानले घरव्यवहार सम्हालेपछि अन्य कामको कुनै चिन्ता छैन,’ उनले भनिन् ।
(दैनिक नेपाल डट.कम बाट )
मोहन बैद्य 'चैतन्य' सित 'शमी' वार्ता
साहित्य र राजनीति फरक फरक विषय हुन् । साहित्य कलात्मक हुनुपर्छ, यो बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कार, भावधारा र सौन्दर्यसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीति,....
सबैभन्दा गम्भीर समस्या नेताहरूमै छ
(यो ऋषिराज बरालको अलि पुरानो अन्तर्वार्ता हो, तर ताजै जस्तो लाग्छ l यसमा उठाइएका मुद्दाहरू अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ...
देशलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि निर्णायक संघर्षमा जानु पर्दछ : कमरेड किरण
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव कमरेड किरणको पछिल्लो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ । समसामयिक विषय....
“हामी सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियानमा छौँ” : प्रतीक, प्रवक्ता नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को केन्द्रीय समतिको बैठक सम्पन्न भएको छ । तीव्र बहसका बीच करिब एक हप्तासम्म चलेको सो बैठकले ...
भिडियो फिचरview all
फोटो फिचरview all
मे दिवस विश्व सर्वहारा वर्गले आफ्नो सङ्घर्षको संकल्प व्यक्त गर्ने दिन हो: भाकपा (माओवादी)
सार्वभौम माओवाद र ‘उत्तर–मार्क्सवादी’ विभ्रम
इतिहासको भ्रष्टीकरण नगरौँ : बलिदानीपूर्ण आदर्शप्रति गम्भीर बनौँ !
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को अपिल
© 2015-2022 @ janamel.com. All rights reserved.